Heshii lagu soo afjarayo dagaalka u dhaxeeya Armenia iyo Azerbaijan oo la saxiixay… – Hagaag.com
Heshii lagu soo afjarayo dagaalka u dhaxeeya Armenia iyo Azerbaijan oo la saxiixay…
Posted on 10 Nofeembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Ra’iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan wuxuu heshiiska ugu yeedhay heshiis “aad ugu xanuun badan aniga iyo dadkeenaba”.
Waxay timid kadib lix todobaad oo dagaal uu u dhaxeeyay Azerbaijan iyo qowmiyado Armeniyaan-ka ah.
Tiro heshiisyo xabad joojin ah ayaa lagu dhexdhexaadiyay tan iyo markii uu dagaalku dib u qarxay bishii September, laakiin dhammaantood way fashilmeen.
Heshiiska cusub, Azerbaijan waxa ay qabsan doontaa aagagga Nagorno-Karabakh oo ay qaadatay intii ay socdeen isku dhacyada. Armenia waxay sidoo kale ogolaatay inay ka baxdo dhowr meelood oo kale oo ku dhow dhow aagaasi, toddobaadyada soo socda.
Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa intii uu ku guda jiray khudbaddiisa khadka tooska ah ee telefishanka laga sii daayay sheegay in 1,960 askari oo nabad ilaaliyayaal Ruush ah la gayn doono aagga hore ee ciidanku isku hor fadhiyo.
Madaxweyne Putin wuxuu sheegay in heshiiska ay ku jiri doonto isweydaarsiga maxaabiista dagaalka, iyadoo “dhammaan xidhiidhada dhaqaalaha iyo gaadiidka laga dhigayo kuwo aan la xayirin.”
Raiisel wasaaraha Armenia Pashinyan wuxuu sheegay in go’aankani uu ku saleysnaa “falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan xaaladda dagaalka iyo wadahadal ee aan la yeeshay khubarada ugu fiican ee arrimahan”.
Mr Pashinyan ayaa yiri “tani guul ma ahan laakiin guuldaro ma jirto ilaa aad u aragto in lagaa adkaaday”.
Magaalada Yerevan ee caasimada Armenia, waxaa isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo ka cabanaya heshiiska sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. Waxay jabsadeen baarlamaanka iyo dhismayaasha dawladda, iyagoo ku qaylinaya “isma dhiibi doono.”
Dhinaca kale dadweyne aad u farabadan oo dabaaldegaya ayaa isugu soo baxay magaalooyinka dalka Azerbaijan guusha uu ciidankooda ka gaaray dagaalkii ka socday Nogorno Karabach.